10 Days avaiita In Bavaria Germany | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Days avaiita In Bavaria Germany
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 21/02/2020)
Kana iwe Watotanga kuronga rwendo kuburikidza Bavaria muGermany, uri pamwe achifunga avaiita. Muri Ungangove akawandirwa kuwanda kwemashoko zvinoshamisa nzvimbo kuzoshanyira. Plus, uchida kukwanawo vose vari 10 Mazuva avaiita muna Bavaria.
Bavaria anezvakawanda kupfupiro, uye kuti ari vamwe. Unogona kushanyira zhinji maguta kwazvo muna Bavaria, se Munich, semuyenzaniso. Unogonawo kuenda pamusoro rakakura Bavarian doro nzira kana uri connoisseur kwedoro.
We achakupai hwakadzama avaiita pamusoro Bavaria, uye zvose unofanira kuita kutevera uye kuva nenguva yakanaka! saka, regai titaure.
Rail Transport ndiye Most zvakatipoteredza Friendly Way To Travel. Thiri nyaya zvakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel ne Save A Train, The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
Chii chaunofanira Kuziva Tisati tawana Started With Our 10 Day avaiita In Bavaria?
Tisati kutanga, pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kuziva.
Bavaria ari dunhu guru, uye iwe unogona nyore kupedza mavhiki mairi. Zvinoita kunge zvakakosha kana uchida kuona zvose zvakawanda.
zvisinei, kana uri kuenda nokuda 10 zuva rwendo, uchabva kucheka zvimwe zvinhu kunze. Chii chimwe, zvingava zvakanaka kuenda Via chitima. Kana iwe uri kuita kuti, uchakwanisa kuwana wose nzvimbo pasina nguva. Pamusoro pe izvozvo, uchava mukana wokupupura mukuru maonero Bavaria zvinowanika.
Uyezve, kuenda nechitima kuburikidza Bavaria zviri nyore chaizvo uye chipa. Tickets vari chipa, uye iwe unogona kushanyira ose enyika mudunhu.
Pakupedzisira, unofanira kuziva kana kuti kushanyira Bavaria. Nguva yako 10 Mazuva avaiita muna Bavaria anofanira kufukidza vari pose kubva September kuna October. Muchava kudzivisa mapoka evanhu, uye uchadzidziswawo kuwana mukana kushanya Oktoberfest.
Zvino kuti zvose izvozvo akafukidzirwa, ngatiregei kutora Kutarira avaiita yako:
Bavaria avaiita Day 1 uye 2: Munich
Paunoenda Bavaria, unofanira kutanga Munich. Kutanga kwazvose, zviri nyore kusvika, hapana basa apo uri Europe. Unogona tora chitima kubva zvinenge kwese uye kusvika Munich. kana, kana uri kuuya kubva kumwewo kure kure, unogona kubhururuka. Munich ndiko kuri guta Bavaria, uye ndege nendege kubva kumaguta akawanda munyika yose. Kana kwete kuti, unogona kusvika nayo nyore nokuda kubhururuka mumwe guta guru uye ipapo kuenda Munich.
Plus, ngatirege kukanganwa kuti ani 10 mazuva avaiita muna Bavaria haagoni kuva vakakwana pasina Munich. You Achawedzera kuwana ichi guta emashiripiti nzvimbo kushanya. Kubva hunoshamisa wachi shongwe kuna Englisher puutarha, uchava mijenya nzvimbo kuti kushanya.
Kana uchida kuona sezvo yakawanda sezvinobvira, isu zano kuti vari pakati. kuti nzira, uchakwanisa kuwana zvose netsoka.
Pakazopera zuva 2, unofanira kurongedza mabhegi ako uye kuenda kuguta Berchtesgaden.
3 uye 4: Berchtesgaden And The Vaaishanda National Park
Berchtesgaden iri muSouth Kumabvazuva Bavaria. Chinhu chiduku muhomwe munyika pamuganhu Austria. Uchawana yakaisvonaka national Park muGermany munzvimbo iyi. Plus, nemiwo kuwana kupedza imwe nguva mune mashiripiti taundi Berchtesgaden.
Pakupedzisira, uchava kushanyira Lake Konigsee uye Makondo Nest. Lake Konigsee ndiyo inonyanya nyanza muGermany uye rakakomberedzwa nemakomo kwazvo. Kana Makondo Nest, Nhoroondo zvose buffs vachadanana kushanyako, sezvo akanga ari murayiro pambiru nevaNazi.
Kana uchida kusanganisa zvinhu, unogona kuenda Salzburg. The guta riri pedyo nomuganhu uye Berchtesgaden, uye zviri zvakafanana mashiripiti kuti Salzburg!
Unogona kugumisa zuva rako chinoshamisa chisvusvuro muna Berchtesgaden. Tapedza usiku, unogona kufamba inotevera rwendo pazuva 5.
Salzburg kuna Berchtesgaden
Munich kuna Berchtesgaden
Linz kuna Berchtesgaden
Innsbruck kuna Berchtesgaden
Bavaria avaiita Days 5, 6, uye 7: Garmisch Partenkirchen, Zugspitze, And Neuschwanstein Castle
Danho rinotevera kwako 10 Mazuva avaiita muna Bavaria inosanganisira vamwe vakawanda wakajeka nzvimbo muGermany. kamwe zuva 5 kunotangira, unofanira kusvetukira chitima kuenda Garmisch Partenkirchen.
Hezvino zvaunogona kuwana munharaunda iyi:
Zuva 5: Kugara uye kushanyira chikuru chikamu guta.
Zuva 6: Enda mashiripiti Neuschwanstein Castle. Munoziva here mumwe zvikuru iconic nhare munyika. Zviri rechokwadi fairytale memauto uye uya Akafuridzira Disney Castle.
Zuva 7: Shanyira kukwirira Zugspitze, riri nokururamisira pedyo kuguta. Pano unogona kuwana imwe zvakanakisisa maonero Alps. Vamwe vanhu hike, asi isu zano kuti kutora waya motokari.
Izvi zvichava wakarebesa chikamu rwendo rwenyu uye rinokosha munhu vene. On zuva 8, unogona anozodzidza rothenburg.
8: Rothenburg avaiita In Bavaria
Zuva 8 anochengeterwa refu chitima tasva uye mavara taundi rothenburg Ob of Tauber. Haufaniri kunetseka kuti vatasvi hwakareba, uchava nenguva yakawanda kushanyira itaundi ichi. Zviri chaizvo duku, uye iwe unogona kuona imwe masikati.
Pakazopera zuva, unogona adye pamusoro Schneeballen. Kana uchida, unogona kugara usiku, kana iwe unogona kufamba inotevera rwendo: MuNuremberg kana Wurzburg.
Berlin kuna rothenburg Ob the Tauber Zvitima
Stuttgart kuna rothenburg Ob the Tauber Zvitima
Munich kuna rothenburg Ob the Tauber Zvitima
MuFrankfurt kuna rothenburg Ob the Tauber Zvitima
Bavaria avaiita Days 9 uye 10: MuNuremberg Or Wurzburg
MuNuremberg ndiyo yechipiri guru guta muruwa Bavaria. Zviri zvakare anofanira kushanyira nzvimbo yako 10 Mazuva avaiita muna Bavaria. zvisinei, kana uchida, unogona nguva dzose chinja kuna Wurzburg. Maguta Vose vari vashoma pedyo napedyo uye rothenburg, saka kufamba chikamu zvichava nyore.
Maguta Vose vane mashiripiti uye akazadzwa Medieval nhoroondo uye nematende. saka, zviri zvechokwadi kwauri kusarudza ndoupi kunakidza.
Sezvo muchava anenge maviri azere mazuva, iwe kuti kunyange kukwanisa kushanyira vose.
Valenza kuna muNuremberg Zvitima
Leipzig kuna muNuremberg Zvitima
Hanover kuna muNuremberg Zvitima
Hamburg kuna muNuremberg Zvitima
saka, ichipo. Your 10 Mazuva avaiita muna Bavaria, Jerimani. We nechokwadi kuti unosanganisira ose kumisa inokosha iyi kwazvo munharaunda Europe. Takavawo zvaisanganisira sei kusvika vose nechitima zvechokwadi nekusangana vose vaiita yazvinofanira kupfupiro.
Kana uchida kuziva zvakawanda pamusoro avaiita In Bavaria, inzwa wakasununguka kuonana Save A Train.
Unoda embed yedu Blog romukova “A 10 Day avaiita In Bavaria Germany” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)